PVC arbor - bestpvcfence.com
Webcard kuZhejiang Jovyea Plastic Co.Ltd.
ABOUT CONTACT KUNYARA
+ 86-18257261120 sales@bestpvcfence.com
Vinyl fence mitambo
musha >Products >PVC arbor
Aya maPVC arbors anogadzirwa kubva kune zvakafanana premium quality PVC mapurogiramu ayo akawanda akagamuchirwa kuti ashandiswe mumupanda uye kushorwa, uye yakagadzirirwa kushanyira uye kugadzirisa kokorodzano. Munda wega wega unogadzirwa muchechi yakasimba yekadhibhodhi pakatengesa uye kutumirwa nemashoko akazara, akafananidzirwa emakurukota. Izvozvi mune zvishoma zvishoma zvinongororwa zvinowanzotorwa uye hazvidi kuti zvisikwa zvacho zviitike.
Nharaunda yegurukota inotakura zvichange zvichisimbisa kutarisa uye kukosha kwezvinhu zvako.
PVC yekushongedza pergola
PVC inotakura munda
Pvc arbor trellis
Chigadziro chinogona kuva chetatu-dimensional detached structure uye yakazaruka mativi uye zvishongo zvakashongedzwa. inogara ichinyatsobatana Kushamwaridzana muUkuchengetwa kwevachengeti kumunda kana kumigwagwa; kana kuti kuzogara mukona yakanyanyisa. Kushamwaridzana muUchiremba pane dzimwe nguva kune kushamwaridzana muUri Nursing yakagadzirwa padenga rekugadzirisa. Zvirimwa zvinokwegura zvinoshandiswa Kushamwaridzana muUniteding pamusoro pekukwirira kwechikwata ichichera kuburikidza nekugadzira fretwork kana slats. Kushamwaridzana muUnitedi arbor kuwedzera | uyewo inogona | inogona kunyange | inogonawo ^ inogona kuisa masuo kana bhenji uye inogonawo kunge iri pasi.
A pvc arbor trellis inowanzove yakashongedzwa neyendaneti yekusimudzira kukwira michero kana mizambiringa. Ichava gweta rakananga rakagadziriswa pakati peZ2 zvigaro kana kuti zvimwe zvechivakwa. Kana kuti ichave yakasongedzwa nemapuranga efence mumunda wakawanda kana jare.
A trellis kana arbor inopa chinyorwa pakarepo kunze kwemasango - kuwedzera chimwe chezvinhu izvi zvekurima zvekurima zvinogona kubatanidza fence yako uye kugadzira chinangwa chokupinda muimba yako kana jare rako. Masvingo asina Unlimited akabatsira vashandi kupa chimwe chekutsvaga musha wavo nekuwedzera kweShamwari mu Nursing arbor kana trellis, yakagadzirirwa uye yakagadzirirwa kuwedzera nzvimbo yeimba yavo uye kutarisa.
Arbors uye trellises zvinopa kusanganiswa kwakanaka kwezvakanaka uye kutapira - kuwedzera chimiro, kushamwaridzana kushamwaridzana mu Nursingd munyaya yemumunda inowanikwa mumunda wako. Vanowedzera yard yako aesthetics uye vanogona kuita semamiriro ezvinhu kana kutsigirwa kwemiti. Arbors inobatanidza Kushamwaridzana muUri Nursing uchida kupinda mumunda wako uye trellis inorondedzera rusvingo, ronga nzvimbo uye inopa ruzivo.
Kuwedzerwa kwe trellis kana arbor kunogona kupa imba yako iyo pachedu, kuchiita kuti irege kusiyanisa nevaya vanokupoteredza!
Nzira yekuvaka pvc arbor
Mubhedha roga roga rakasimudzwa uye sq ft horticulture, trellises vanojaira kukura zvakasvibirira kwete pane zvisingasviki. Izvi zvinopa imba yakakura yekukura mukati mezvishoma zvishoma.
Zvose Zvose sq sq ft horticulture, Bhuku reChipiri Rokunyora rinotora rebar, magetsi uye ndima trellis netting, nokuti inopa kuti igadzire trellis. Ndakatarisa kuti izvo zvingave uye handina kutarisira trellis netting naizvozvo ndakasvika nemanzwiro angu angave akakwirira.
Inosanganisira asina ruzivo vinyl yakavhengwa munda wefence, ½ inch PVC, mamwe mapapiro ePVC, mamwe marefu akabatwa nyere, hapana chisungo uye pepa isina ruzivo. Nezvikwata iwe ungada shanje rekugadzira kubvisa tsambo dzembambo, saw saw kana PVC ruoko rwechigadziro chekuvhara PVC, nyundo yekuvhara tsvimbo dzomiti uye nyoka dzesimbi kuti dzisakure chero zvisungo.
Ndinoda kuti ndikupei vhidhiyo kana nhanho nhanho dzemakumbo, zvisinei ndezvipi zvangu zvandinezvo zvine trellises zvachose zvakaitwa uye in situ.
Edza urefu hwebhokisi uye ucheke chunk yePVC kwaro urefu hwakafanana neiyo 2 zvinhu zvakasvibiswa zvakaenzana zvakaenzana, ini ndakazvisika kumativi mana.
Isa zvinhu 3 pamwe chete ne 2 PVC zvidzitiro.
Ununura ruzivo rusina ruzivo uye ucheke urefu hwakareba urefu hwakafanana nehupamhi sePVC yako. Iwe unenge uchida kubva iyo ivhu, zvisinei chete nehuviri hwemasentimita. Isa PVC pamusoro pechipfigiro uye uibatanidze nezvimwe zvisungo zvisingaiti, rutsoka rumwe norumwe.
Dura tsvimbo yerabhi muzvikamu zvina zvetsoka zveCNUMX uye uaiise mukati mevhu, chiyero chePVC frame kunze kweumwe. Pound chimwe nechimwe 2 makumbo akadzika uye slide PVC pamusoro pemiti yembambo.
Takasiya PVC chena gore rekutanga uye raive UGLY.Takaenda navo kugaraji uye vakavezesa nevamwe vasina ruzivo kunze kweputi kupora pamba pakutanga kwegore redu rechipiri.
Jovyea inyanzvi yekugadzirwa kweChinese (factory / grossist / suppliers) iyo inofunganya nekugadzira, kukura nekugadzirwa kwePVC marbor profiles Zvose zvemiti yedu inoteerera nehutano hwakanaka hwehutano hwemhando, zvigadzirwa zvedu zvave zviri vazhinji vevatengi pamwe chete vanobvumirana.
Zita Rako *
ADD.: NO.163-1 HUAN CHENG EAST ROAD, SHUANGLIN TOWN, NAN XUN RUTS, HUZHOU CITY, ZEJIANG PROVINCE, CHINA.